Health – ပဒသော
ပြည်သူများလုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၉:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက်အလက်များအရ -တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၉,၁၈၇,၉၄၃) ဦးနှင့် သေဆုံးသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၇၁၆,၀၇၅) ဦး ရှိပါသည်။ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများ ဆက်လက်များပြားလျက် ရှိသောကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ပေါ့ဆမှု
သားအိမ်ကင်ဆာကိုတောင် ပိန်းကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်သလို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှင့် လယ်ပုဇွန်လုံး
သားအိမ်ကင်ဆာတောင် ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှင့် လယ်ပုဇွန်လုံး” တို့အမေအတွက်ဆေးတွေအများကြီးရောက်လာပါပြီ….အမေကသားအိမ်ကင်ဆာကိုနှစ်ရှည်လများခံစားနေရတာပါ…. ဆေးသွင်းလိုက် ဓာတ်ကင်လိုက်နဲ့ ဆေးရုံမပြတ်တက်လိုက်ဆငိးလိုက်နဲ့ ဆရာဝန်စုံအောင်ကုလာရင်းကပဲ ကင်ဆာရောဂါကတော့ တနေ့တခြား တတိတိနဲ့တိုးလာတာ ….. အခုတော့ အဆင့်လွန်ဆိုပီး သမားတော်ကလည်း ခီမိုထပ်သွင်းဖို့ တောင်လက်မခံတော့ပါဘူး …. ဓာတ်ရောင်ခြည်လည်းတခေါက်ကို၃၅ကြိမ်စီ၂ကြော့ပြန်ကင်ထားပီမို့ ထပ်ကင်လို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့…. တိုင်းရင်းဆေးလေးတွေသောက်ကြည့်သဘောင်္ရွက်ထောင်းသောက်ကြည့်ဖို့အကြံပေးပြီးအိပ်ဆေးနဲ့သွေးတိတ်ဆေး နာကျင်ပျောက်ဆေးတွေပဲပေးပါတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ဟိုမေးဒီမေးမေးကြရင်းကပြည်ကအမတဝမ်းကွဲဆီကကြားတဲ့ဆေးကလယ်ပုဇွန်လုံး(ဂဏာန်းလုံး)ကိုပေါက်ပန်းဖြူရွက်နဲ့ချက်စားရမယ် ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည်နဲ့ဖန်ရေဆေးတာ ပြုတ်ရည်ထဲဝင်စိမ်တာလုပ်ပေးရမယ်တဲ့။ လက်တွေ့ပျောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကပေးလိုက်တဲ့ဆေးနည်းပါ….
ကျောက်ဆို ဘာကျောက်ဖြစ်ဖြစ်ကြေတယ်တဲ့ဗျာ…(အချိန်၂မိနစ်လောက်ပေးပြီ ဖတ်သာကြည့်…)
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာပဲ ကျောက်တည်တည်၊ သမင်ဂျိုကို ဓားလေးနဲ့ခြစ်ချ …. မန်းကျီးစေ့တစ်စေ့ခန့်၊ ပြီးတော့ သံပုရာသီး အရည်ညှစ်ပြီး အစောကခြစ်ထားတဲ့သမင်ဂြိုလ်အမှုန့်နဲ့ရောသောက် ရပါတယ် ။ ခွဲစရာကိုမလိုပါဘူးတဲ့။အမေကခွဲပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနည်လေး မှတ်ထား၊နောက်ဖျော်တိုက်တဲ့ ဆိုပြီး မိန့်တော်မူပါတယ်။ အမျိုးတို့သိစေချင်လို့ မှတ်သားထားကြစေလိုပါတယ်၊ အရေးကြုံခဲ့သော် အသုံးပြုနိင်ကြပါစေ။ သမင်ဂြိုလ်ကို မခြစ်ချပဲ ကျောက်ပျဉ်မှာ သံပုရာရည်နဲ့သွေးပြီးသောက်လို့လဲရပါတယ်။ သံပုရာသီးတစ်လုံးကို သံပုရာရည်ဖျော်ပြီးသမင်ဂျိုမှုန့်နဲ့ရောသောက်လဲရပါတယ်။
ဒညင်းသီး အကြောင်း ရေးပါဆိုလို့ ထွေထွေ ထူးထူး မပြောတော့ပါဘူး။ ဒညင်းသီးကို ရုက္ခဗေဒ အရ ဘယ်လိုခေါ်တယ။် ဘယ်မျိူးစိတ်ဆိုတာ လူတိုင်း စိတ်မဝင်စားဘူး ။စိတ်ဝင်စားတာက ဒညင်းသီး ဘယ်ဈေး ပေါက်လည်းဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ လူနာတွေ ဆီးပူ ဆီးအောင့် ဆီးနည်း လို့ လာရတဲ့ အချိန် ရာသီအရ တွက်ဆ
ငါးချဉ်၊ ဆူရှီ၊တုတ်ထိုး ကြိုက်တဲ့သူတွေ အထူး သတိထားပါ လက်‌ထဲကေ န သံကောင်တွေ ထွက်လာတာတဲ့
ဆရာရေကျမလက်ကောက်ဝတ်က အရမ်းယားလို့ ပွတ်နေမိတာ အဲဒီနေရာက သံကောင်သေးသေးလေး အရှင်လေး ထွက်လာလို့” “ဟား” ကိုယ်လည်း အံ့သြယုံသာ။တ ကယ်တော့ သူအဲဒီနေရာမှာ ကွက်ပြီး ယားနေခဲ့တာ ၁ နှစ်လောက် ရှိပြီ။ ကျနော်လည်း ရွာလည်နေအောင် စဉ်းစား ကုခဲ့တာ မအောင်မြင်။ နောက်တော့ ညည်း Fixed Drug Eruption ဖြစ်မှာပဲ
သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ တမလွန်က ချစ်ခင်ရသူများနဲ့ စကားပြောနိုင်တဲ့ ဖုန်း
ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတာဟာ ဘဝမှာ အကြေကွဲရဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသောကကိုလည်း လူတွေက သူ့နည်းသူဟန်နဲ့ တစ်ဘာသာစီ ကိုင်တွယ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေ မိသားစုဝင်တွေ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့အခါ နှုတ်ဆက်စကားလေးတောင် ပြောခွင့်မရလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါသည်ပင်လျှင် ဂျပန်လို ကာဇီနို ဒင်ဝါ၊ မြန်မာလိုတော့ လေလှိုင်းဖုန်းရယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဖုန်းရုံကလေးရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလို့ ပြောရမှာပါ။
သင့်အသက်ကို တန်ဖိုးထားရင် အချိန်2မိနစ်လောက်ပေးပြီး နားထောင်ပေးပါ..(ရုပ်သံ)
ရသစုံ | August 2, 2020
အမှန်လားအမှားလား ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဒီနေ့ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေက ၁။ ရာသီလာနေရင် ခေါင်းမလျှော်ရဘူး လက်ဘက်မစားရဘူး မာလကာသီးမစားရဘူးဆိုတာ ဟုတ်လား။ ၂။ မွေးကင်းစ ကလေးကိုဆံပင်ရိတ်ရင် ဆံပင်ပိုသန်တယ်ဆိုတာဟုတ်လား။ ၃။ အမာရွတ်ကို နနွင်းထိရင် ခရုသင်း သမင်ဖြူဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လား ဆိုတာတွေပါ။ ဒီအစီအစဉ်က ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေအကုန်ဖြေပေးတာမဟုတ်ဘဲ အများစုအထင်မှားနေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတွေကိုသာ ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်လို့ အဲဒါနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကို အရင်အဓိက
အရက်သောက်သူများ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ခြေပိုများ
သုတစုံ | August 1, 2020
အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းသွားပြီး COVID-19 ရောဂါကူးစက်နိုင် သည့်အန္တရာယ်ပိုများကြောင်း အမေရိကန်ဆရာဝန်များက သတိပေးသည်။အရက်ကို လွန်ကဲစွာမကြာခဏသောက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပြင်းထန်သောအန္တရာယ် အချို့ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် COVID-19 ရောဂါ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ် ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကလည်း သတိပေးထားသည်။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့် ယင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြား ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာထားသော လေ့လာမှုများ မရှိသေးသော်လည်း အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်